I-Apartment ye-Turqoise yinxalenye yee-Apartments e-Roztocze, eyakhiwe ngo-2021 kwisakhiwo esitsha se-Old Town yase-Zamość.
Indawo yokuhlala isisiseko esihle sokuhlola iRoztocze, kwaye ummandla wethu ubonelela ngamathuba amaninzi okuzonwabisa - nawo asebenzayo.
Sinokunceda ukulungelelanisa uhambo lokuhamba ngenqanawa e-Nielisz, ukuhamba ngephenyane kuMlambo i-Wieprz, sicebisa izidiliya zasekuhlaleni kunye nokungcamla kwewayini okanye ukucebisa ukuba ubone ntoni kwindawo - uzive umenyiwe!
Ifulethi linazo zonke izinto eziluncedo zokuhlala kamnandi - kubandakanywa. ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, oomatshini bekofu ababini (abaphuphumayo kunye neNespresso), iswekile, ityuwa, ipepile, isepha, iicapsules zekofu, ijeli yeshawa, ishampu, iseti yeetawuli zondwendwe ngalunye, umatshini wokuhlamba kunye neecapsules zokuhlamba, isomisi seenwele, intsimbi, iTV ( I-Smart TV + iitshaneli ezili-102), i-fiber optic internet, ibhedi ye-QUEEN.
Kunokwenzeka ukuthenga ivawutsha (PLN 30 / ngosuku / umntu) isidlo sakusasa kwindawo yokutyela yaseRenesans, efumaneka kwi-200 m ukusuka kwindlu.
Ukuhlala kweveki okanye ixesha elide, ibhotile yasimahla yeZamojski Wine!
I-TV ene-I-HBO Max, I-Netflix, izitishi zeTV eziqhelekileyo
IApartment yeTurquoise ikumbindi weZamość, kwiDolophu eNdala, kwisakhiwo esandula kwakhiwa kwisitalato iBazyliańska.
I-café yase-Arabeska inokufumaneka kumgangatho ophantsi wesakhiwo, kunye nevenkile yokutya ye-Żabka kwisakhiwo esilandelayo.
Kumgama omfutshane (malunga nemizuzu emi-5 ngeenyawo) uya kufumana ubuncinane ishumi elinesibini lokutyela ezahlukeneyo, kubandakanywa nezo zikhonza izitya zengingqi (kubandakanya indawo yokutyela yaseBohema, iMyuziyam yokutyela).
Ipaki - 300m
Zamojski Lagoon - 1.3 km
IZOO - 1.4 km
IZwierzyniec, iPonds Echo kunye neRoztoczański National Park - 32 km
I-Krasnobród, i-Pools Island - i-28 km
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Zamość